थाहा खबर: मन परेको किताब रातभरि पढ्छु
भदौ १७, २०७३ शुक्रबार
काठमाडौं : नेकपा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीको हिजोआज अर्को परिचय पनि बनेको छ- लेखक। उनले लेखेको पुस्तक 'समृद्ध नेपाल' को दोस्रो संस्करण पनि बजारमा आएको छ। संसदको विकास समितिका सभापति अधिकारी व्यस्त समय तालिकाकाबीच पुस्तक पढ्न छुटाउँदैनन्। पत्रपत्रिकामा विकास निर्माणका विषयमा उनका लेखहरु पनि प्रकाशित भइरहन्छन्। नेता अधिकारीको पुस्तक अध्ययनबारे थाहाखबरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
स्कुल पढ्दैको कुरा हो। हामी साथीहरु मिलेर गाउँमा लाइब्रेरी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो। तर किताब किन्न त पैसा चाहियो। त्यसका लागि हामीले पुस्तकालय निर्माण गर्ने भनेरै देउसी खेल्यौं। पुस्तकालय निर्माण गर्ने अभियान नै चलायौं र पुस्तकालय बनाउन सफल भयौं।
हामी साथीहरुबीच कसले बढी पुस्तक पढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो। एसएलसी पास गरिसकेपछि कोर्स भन्दा पनि बाहिरका किताब बढी पढ्न थाले।
दरमा के खाने? कसरी खाने? अनि तीजको ब्रत कसरी बस्ने?